Indlu enkulu eFondren!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRachel
Ifumaneka kwiSithili seMbali yeFondren. Indawo yam ikwindawo ezolileyo, iibhloko nje ezisuka kwiindawo zokutyela ezintle, iibhari zewayini, iivenkile zekofu, iivenkile, iindawo zomculo, kunye neevenkile ezithengisa ukutya. Kwakhona isondele kakhulu kwiYunivesithi yaseMississippi yeZiko lezoNyango, iSibhedlele saseSt Dominic, iSibhedlele saseBhaptizi, kunye neYunivesithi yaseBelhaven.
Le ndlu ifanelekile kuye nabani na! Usomashishini ongaphandle kwedolophu uya kufumana uxolo kunye nokuzola, okwenza kube lula ukusebenza. Umthengi uya kuba yimizuzu nje ukusuka kwi-boutiques yase-Fondren kunye ne-Highland Village, eyona nto ingcono uJackson kufuneka anikele ngayo. Amagorha adiniweyo endlela adlulayo aya kulala kakuhle kumandlalo we-Queen size.
Thenga kwi-Whole Foods kwaye ubuyele kwindawo yakho kwaye uziphekele ukutya kwakho. Ikhitshi libonelelwe ngokupheleleyo nazo zonke izixhobo zokupheka ozidingayo ukuze wenze owakho umsebenzi wobugcisa obunokutyiwa.
Konwabele ukuhlala kwiisofa ezitofotofo, khulula izihlangu zakho, ucofe kumabonakude kwaye uphakamise iinyawo zakho phezulu. Ukuba ufuna ukolula imilenze yakho ungahambahamba kwenye yeyona ndawo intle yaseJackson kwaye emva koko ungene kwiSithili saseFondren Biz. I-Walkers Drive In, i-Babalu, i-Roosters, i-Saltine, i-Aladdin, i-Barrel House, kunye ne-Pig kunye ne-Pint zimbalwa zeendawo zokutyela ezinkulu ezikufutshane. Bamba umnyhadala wesizwe eDuling Hall emva koko ugoduke kwaye uphumle kwibhedi epholileyo.
4.89 out of 5 stars from 243 reviews
4.89 · Izimvo eziyi-243
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi243
Umbuki zindwendwe ngu- Rachel
Izimvo eziyi-1 094
Ndilapha ngenxa yakho ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa inqanaba lethu lokusebenzisana likuwe. Nditsalela umnxeba okanye umyalezo kuphela.